How to create backlink online?
Nyaya iyi inopihwa kune unyanzvi hwebhizimisi mukutsvaga kuburikidza kuburikidza nehutano hwakanaka hwekuvaka kambani yekuvaka. Kuvandudza nzvimbo yako yekutsvaga yewebsite kunobatsira kuti uwanikwe mukutsvaga paIndaneti uye uwedzere mikana yako yekuvandudza mararamiro ako uye simba uye kukwezva vatengi vanobhadhara.
Chii chingaitwa nevartists kuti vauye nemigwagwa yakawanda kune mapeji avo ewebhu? Imwe yevatyairi vekugadzirwa kwehupenyu ndiyo kutsvaga. Ndicho chikonzero kuva newebsite yako yekutsinhanisa inoratidzira mukutsvaga paIndaneti kunogona kugovera SEO maitiro ako. Kubudirira kutsvaga injini yekugadzirisa maitiro kunosanganisira keywords kutsvakurudza uye kushanda kwavo kwakarurama. Uyezve, kuti uwane kukura kwekuonekwa, iwe unofanira kuramba uchidzokorora zvinyorwa zvako uye kunyora pane zvinokosha zvinonakidza nekuda kwemashoko ako angangodaro. Zvisinei, imwe yenzira dzakanakisisa yekuvandudza unyanzvi hwako hwewebsite webasa reSeO ndowokuwana backlinks. Iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti yakanaka uye yakakosha. Kana zvisina kudaro, uri kutengesa kurasikirwa neseriti yako SERP. Iyo inonyanya kuiswa kune imwe nzvimbo, iyo inowanikwa yakanakisisa juice inopa. Google, pamwe chete nedzimwe tsvakurudzo dzinotsvakurudza, kuongorora nzvimbo yewebhu kuburikidza nehutano hwekunze kwekunyorera hunoita kuti huve. Inobatsira kusiyanisa zvakakodzera kushanyira webhusaiti kune vamwe.
Kuwana mabhizimisi kubva mumabloggi uye mapepa ezvimhanzi mukana wakakwana wekuvaka musimboti wekubatanidza. Kunyora muenzi wezvinyorwa pane zvakakosha kune mabhizimusi emigodhi uye mawebhusayithi anogona kubatsira zvikuru. Kunyange zvakadaro, kune vamwe webmasters vasina nguva uye vanoda kuisa mazano ematanho ekutsinhanisa anotevera. Zvisinei, kune nzira yakanaka yekubuda nayo. Vanogona kugadzira backlinks yavo yepaIndaneti kuburikidza nekupa kune webhupo zvinyorwa zvine zvizhinji zvevateveri uye vanobvumira mabhuku ekukoka pamapeji avo ewebhu.
Muchikamu chino tichakurukura zvakajeka kuti webhu hupi zvingakubatsira iwe kukwidziridza unyanzvi hwako hwewebhu webhusaiti nekuisa zvinyorwa pairi pamapeji avo.
Webhutori dzinobatsira kuwana backlinks paIndaneti
Takasarudza kukurudzira mamwe mawebsite anokosha anogona kukupa zvakanakisisa kumashure kumashure uye kusimudzira unyanzvi hwako hwebhizimisi uye mukurumbira.
Medium (web) webhusaiti inonyanyozivikanwa inoramba ichinyora zvinyorwa uye inokurudzira mablogi uye vhizimisi kumabhizinesi kuzvinyora zvinyorwa zvepamusoro mapeji. Nyaya yako inogona kuva yehurukuro ipi zvayo uye inogona kuva nekutaridzika zvakadai semavhidhiyo, mifananidzo, infographics, nezvimwewo. Iko mukana wakakwana kune vanyori vanoona uye vanoita sezvavanenge vachitaura ruzivo rwakakosha pamusoro pebasa ravo kwete nemashoko chete. Zvinyorwa zvinowana zvakawanda zvekuda uye zvikamu zvikava TOP uye zvinoramba zvichionekwa kune vose vanoona nzvimbo yepawebsite kwenguva yakareba.
Quora mubvunzo uye kupindura nzvimbo yepaiti apo pfungwa dzinoita kuti vatungamiri uye nyanzvi vapindure mibvunzo apo vanoona unyanzvi. Iyi pepati inopa mukana wevatengesi vekutsvaga nevablogiki kuti vagadzire purogiramu yavo pachavo uye kunyora zvinyorwa zvebhurugu pane zvidzidzo zvavanoda. Zvisinei, kwete dzose zvigaro zvakakodzera kuiswa pamapeji eQuora. Ndokusaka uone kuti mhinduro dzako dziri kutsvakurudza-dzakavakirwa uye dzinofadza Source .